IStudio yaBucala epholileyo: ecaleni kwechibi, kufutshane neNashville - I-Airbnb
IStudio yaBucala epholileyo: ecaleni kwechibi, kufutshane neNashville
Green Hill, Tennessee, United States
Isitudiyo esihle esibekwe njengenxalenye yekhaya lethu. Le ndawo inikezelwe njengendawo yokuhlala yesitudiyo kwaye inomnyango wayo owahlukileyo. Kukho indawo yokupaka eninzi ekhoyo. Sisechibini le-Old Hickory ngokuloba, iirempu zamaphenyane, iindlela zebhayisekile, ukuqubha ngaphantsi kwemizuzu emi-5 yekhaya lethu. Ifumaneka kwi-cul de sac, i-traffic incinci. Idolophu yaseNashville imalunga ne-20-30 imizuzu ukusuka kwikhaya lethu. Phakathi kweHermitage kunye neMt. Juliet, izinto eziluncedo zisondele kunye nendalo ekoneni ukwenza indawo eyonwabisayo.
Sibamba indawo yestudiyo enqabileyo encanyathiselwe kwikhaya lethu. Umnyango westudiyo usemva kwekhaya ukuya ngasekhohlo xa ujongene nomphambili wendlu. Ininzi indawo yokupaka. Ibucala ngokupheleleyo kwiindwendwe zethu. Kukho indawo yepatio ngaphandle kwesitudiyo somoya omtsha. Ngaphakathi sinebhedi enkulu elingana nenkosi. Kukho i-sofa yesayizi epheleleyo yokuphumla. Sikwabonelela ngeematrasi zomoya ezi-2 ezikumgangatho ophezulu kundwendwe lwesithathu okanye lwesi-4. Ibhafu epheleleyo kunye nekhitshi ikwayinxalenye yendawo yesitudiyo. Ikhitshi libandakanya isitovu esigcweleyo kunye ne-oveni, kunye ne-microwave. Ikhululekile ngayo yonke into efunekayo ukubonelela ngendawo yokuhlala kwindawo yaseNashville.
4.96 · Izimvo eziyi-210
Sihlala kwindawo yokuhlala. Kuthe cwaka kumsebenzi wesiqhelo weveki nangempelaveki. Indlu yethu ikwi-cul de sac ukuze singafumani ngxolo yezithuthi ezininzi apha. Siyimizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yokuzonwabisa ye-Shutes lane, ebandakanya indawo yepikiniki, irempu yesikhephe kunye nokuloba okuvunyelweyo. Kukho iindlela zebhayisekile kwakhona kule ndawo. Iyadi yethu yangasemva ivulekile kwaye inemithi kakhulu ukuze sibone amaxhama, iintaka ezahlukeneyo, kunye nemivundla ngamaxesha athile. Siyimizuzu emi-5 ukusuka eLebhanon Pike enevenkile ezithengisa ukutya, iindawo zokutya kunye neevenkile zesebe kwi-10 ukuya kwi-15 imizuzu kude. I-I40 malunga ne-15-20 imizuzu ukusuka kwindlu yethu kwaye iya kudibanisa kwiindawo ezahlukeneyo ezijikeleze njengedolophu yaseNasvhille. Unokufika edolophini ngeLebhanon Pike.
Siyafumaneka kwimibuzo yeendwendwe okanye izicelo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Green Hill